Qeexida GOB IYO GUN.Gob:Gobbaad tahay maxaa looga jeedaa?. |
Qeexida GOB IYO GUN.Gob:Gobbaad tahay maxaa looga jeedaa?.
Waxaa looga jeedaa Geedka Gobka,Wuxuu gaar la yahay astaamo waxtar u leh noolaha, Waxaana ka mida,Waa Geed cidii magan gashaa ay ku magan galayso waayo?wuxuu leeyahay Qodxo soo Qaloocan oo waxay qabsadaan sahal uga baxayn TUS1:Shimbiruhu waxay cuf ka samaystaan markasta oo ay geed Gob ah arkaan,inta ayna geed kale ka samaysan,Waana geed ay Maska iyowixii kale ee ugaadhsan lahaaba ay kaga nabadgalayso,Dadka oo kale haday iyaguna Dugaaga ka Fuulaan waa mid ay ku nabad galayaan.
TUS2:Waa geed midho la cunno leh laguna gaajo baxo,Waana geed Deeqsiya oo wax bixin badan.TUS3:Waxaa caleentiisa loo isticmaalaa Qasil jidhka la marsado la iskuna nadiifiyo, Waxaanu galaa Ganacsi oo inta la ridqo ayaa la xidhxidhaa Budada caleenta Qasilka loo yaqaano.
TUS4:Waxaa laamihiisa laga goostaa loolka Guryaha lagu dhisto oo aanu Xarku galin(xarka:cayayaan yar oo geedaha dhuuxooda cunna).TUS5:Jiridiisa waxaa laga qoran jiray fandhaalada iyo xeedhada oo agab u ahayd soomaalidii hore waxaanay u isticmaali jireen inay wax ku cunaan,Fidhinka lagu feedho iyo Barkinka ay barkan jireen,Gambadhada ay ku fadhiistaan iyo gorofka ay caanaha ku maalaan iyo koobab ay wax ku cabaan.
TUS6:Xididadiisa waxay u isticmaalaan dhigaha oo ah shay ugu qiimo badan dhisida guri soomaaliga waana kuwa ugu cimriga dheer.intaas iyo in ka badan oo aynaan halkan ku soo koobi karin ayaa aynu ka sheegi karnaa qiimaha wanaagsan ee geedkan Gobku leeyahay.
GUN:Waxaana loola jeedaa jirida xaga sare ka diiran oo aan xidido ay ku joogta ahayn qalalan oo aan ahayn jirida geedka gobka,balse ah jirid geed kale,Wax nacfiya oo ay leedahayna ma jirto,oo aan ka ahayn foolxumo ay deegaanka ku hayso mooyaane.
Qofka sifooyinkaa aynu kor ku soo sheegnay leh ayaa lagu sifayn karaa GOB.waa in qofka gobku uu yahay qof wax bixin kara Deeqsiya waa midhihiiye,Magan galyo leh oo geesiya lana magan gali karo sida geedka gobka.Waxtar leh oo dulqaad badan laguna soo hirto garabkiisa, calool baxan oo nadiif ah sida caleenta gobka oo kale waa qasilkee taasi oo nadiifisa uskaga, uu u nadiifin karo caloolaha dadka utumaha isku haya ee wax kala tirsanaya.
Qofka aan sifooyinkaa lahayn maaha Gob ee waa GUN.Gob iyo Guna laguma noqdo hadba cidaad ka soo jeedo aa aad ka dhalatay ee waa mid sifo wanaag iyo sifo xumo lagu kala kasban karo.
Waxaana sifooyinkan inooga faallooday oo si cilmiya noogu sharaxay Xildhibaan hore Heer Federal Dawlada Itoobiya.XIL:Axmed Biidhe,oo uu isagana uga sheekeeyay Aabaha Dr OBolos alle ha u naxariistee.
QALLINKA;C/NAASIR GURAY MEECAAD
GOOBTA SHEEKADA LAGU QORAY GOBOLKA GABILEY. DATE 22/09/2016.